Receipes | Food Magazine Myanmar | Page 128
French Style Onion Soup ► ပါဝင်ပစ္စည်းများ ♦ ကြက်သွန်နီ – ၄ လုံး ♦ ထောပတ် – လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၂ ဇွန်း ♦ သံလွင်ဆီ – လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၂ ဇွန်း ♦ ဂျုံမှုန့် ....
1 - April - 2016
မက်ကရယ်ငါးနှင့် ပန်းသီးစိမ်းအစပ်သုပ် (Mackerel and Apple Spicy Salad)
မက်ကရယ်ငါးနှင့် ပန်းသီးစိမ်းအစပ်သုပ် (Mackerel and Apple Spicy Salad) ပန်းသီးစိမ်းအရသာလေးကို မက်ကရယ်ငါးနှင့် တွဲသုပ်တာလေးက တစ်မျိုးလေးစားကောင်းသလို လတ်ဆတ်လန်းဆန်းစေသော ခံစားမှုကိုရရှိစေပါတယ်။ သုပ်စားကြည့်လိုက်နော် . . . ။ ► ပါဝင်ပစ္စည်းများ ♦ မက်ကရယ်ငါးဘူး – ၁ ....
Pecan Nuts Brownies Brownies ချစ်သူများအတွက် Pecan Nuts နဲ့ ပြုလုပ်ထားတဲ့ Brownies ပါ။ ► ပါဝင်ပစ္စည်းများ ♦ ချောကလက် (Semi Sweet) – ၁၅ဝ ဂရမ် ♦ နေကြာဆီ – ၁၂ဝ ....
ကကတစ် ငါးချဉ်စပ်ဟင်းချို အခုဆက်လက်ပြီး ကြက်သားကင်ထားတဲ့ အချိန် မိနစ် ၄ဝ (သို့) မိနစ် ၅ဝ ကြာမှာဆိုတော့ ကြက်သားကင်ကျက်ဖို့စောင့်ရင်း ဟင်းရည်လေးချက်ရအောင်။ ကကတစ် ငါးချဉ်စပ်ဟင်းလေးကိုတော့ အားလုံးကြိုက်နှစ်သက်ကြမှာပါ။ ကဲ . . . စပြင်ရအောင်။ ► ပါဝင်ပစ္စည်းတွေကတော့ ♦ ....
ကြက်သားနှင့် ပုစွန်လုံးအချိုချက်၊ ဆန်တို့ဟူးသုပ် (Chicken and Shrimp Ball in Honey-Oyster Sauce with Rice Tofu Salad)
ကြက်သားနှင့် ပုစွန်လုံးအချိုချက်၊ ဆန်တို့ဟူးသုပ် (Chicken and Shrimp Ball in Honey-Oyster Sauce with Rice Tofu Salad) ဒီလအတွက် နောက်ထပ်ရွေးချယ်ပေးလိုက်တဲ့ ဟင်းလျာအတွဲလေးကတော့ တရုတ်အစားအစာကို အခြေခံပြီး ပြင်ဆင်ထားတဲ့ ကြက်သားနှင့် ပုစွန်လုံးအချိုချက်နဲ့ ဆန်တို့ဟူးသုပ်ပါပဲ။ ကြက်သားကို ....
ဗီယက်နမ်ကော်ပြန့် ဗီယက်နမ်ကော်ပြန့် လုပ်စားလိုသူများအတွက်ပါ။ ဆောင်းတွင်းမှာ ပါဝင်ပစ္စည်းတွေကို လတ်လတ်ဆတ်ဆတ် နုနုချိုချိုလေး ဝယ်လို့ရတာမို့ လုပ်စားဖို့ အကောင်းဆုံးအချိန်ပါ။ ဖော်ပြပါ ပါဝင်ပစ္စည်းတွေအပြင် ကိုယ့်စိတ်တိုင်းကျ နှစ် သက်ရာအသီးအရွက် ပဲပင်ပေါက်၊ ထိုင်းဘေဆယ်၊ ပူဒီနာ စသည်တို့ကိုလည်း ထည့်ပြီးလုပ်နိုင်ပါတယ်။ မုန့်ဟင်းခါးဖတ်နေရာမှာ ပဲကြာဆံပြုတ်ကို အစားထိုးသုံး နိုင်ပါတယ်။ ....
အင်းမုန့်တီ ကျွန်မကတော့ မုန့်တီဆို ဘာမုန့်တီဖြစ်ဖြစ် အကုန်ကြိုက်ပါတယ်။ ကျွန်မတို့အိမ်မှာတော့ အာပူ လျှာပူကို အမြဲလုပ်စားဖြစ်တယ်။ ဒီတော့ တစ်ရက်မှာ သားကြီးတို့ရဲ့ မြန်မာစာသင်တဲ့ ဆရာမကြီးကို အင်းမုန့်တီအကြောင်း စကားစပ်မိရင်းနဲ့ ကျွန်မထုံးစံအတိုင်း မေးမြန်းသင်ယူပါတယ်။ ဆရာမကြီးက ကျွန်မအမျိုးသား ကိုထက်မိဘတွေရဲ့ မိတ်ဆွေလည်းဖြစ်တာမို့ ကျွန်မတို့နဲ့လည်း မိသားစုလိုမျိုး ....
Pork Chop Wiener Schnitzel
Pork Chop Wiener Schnitzel ယခုလုပ်ပြမည့် Wiener Schnitzel ကတော့ ဂျာမနီက ဆင်းသက်လာတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကြွပ်ရွပြီး စားလို့ကောင်းပါတယ်။ အချို့က အမြည်းအဖြစ် စားသုံးကြသလို အဓိကဟင်းလျာ အနေနှင့်လည်း စားသုံးတာ တွေ့ရပါတယ်။ လုပ်ကြည့်ကြမယ်နော်။ ► ပါဝင်ပစ္စည်းများ ♦ ....
28 - March - 2016
မြေအိုးကြက်ဆီထမင်း (Claypot Chicken Rice)
မြေအိုးကြက်ဆီထမင်း (Claypot Chicken Rice) စင်္ကာပူ၊ မလေးရှားမှာ နာမည်ကြီးလူကြိုက်များတဲ့ မြေအိုးကြက်ဆီထမင်းဖြစ်ပါတယ်။သူ့ရဲ့ထူးခြားမှုက ထမင်းကိုမြေအိုးနဲ့ချက်ပြီး အရသာနှပ်ထားတဲ့ကြက်သားတို့ အားလုံးကိုရောချက်ထားတဲ့ သင်းပျံ့မွှေးကြိုင်တဲ့ မြေအိုးထမင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ ညစာအဖြစ်အစားများကြတဲ့အတွက် ဆိုင်တွေမှာတော့ မြေအိုးပေါင်းများစွာနဲ့ အသင့်ချက်ထားပြီး လက်မလည်အောင်ရောင်းကြရပါတယ်။ မြေအိုးနဲ့မချက်ဘဲ ထမင်းပေါင်းအိုးနဲ့လည်း အရသာတူချက်နိုင်သလို လူကြိုက်များပြီးအရသာထူးခြားချက်ရလွယ်ကူတဲ့ မြေအိုးထမင်းချက်နည်းလေး မျှဝေ ....
မြေပဲချိုစပ်ခရမ်းချဉ်သီးသုပ် ဒီမြေပဲချိုစပ် ခရမ်းချဉ်သီးသုပ်နည်းလေးကိုတော့ ကျွန်တော် အိမ်နဲ့အဝေးမှာနေတဲ့အချိန်က အလွယ်တကူလုပ်စားရင်း အကြိုက်တွေ့ခဲ့ရတဲ့ နည်းလေးဖြစ်ပါတယ်။ ထိုင်း သကာအနှစ်များရရင်ဖြင့် အကောင်းဆုံးအသုပ်ကို ဖန်တီးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ခုတော့ ထိုင်းသကာအနှစ်မရလို့ သကြားညိုနဲ့ဘဲ သုပ်နည်းလေးလုပ်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ► ပါဝင်ပစ္စည်းများ ♦ ခရမ်းချဉ်သီး – ၅ လုံး (ခြမ်းပြီး ....